Diyaaradaha Mareykanka oo duqeynaya Shabaab | STN Somali
Home Wararka Diyaaradaha Mareykanka oo duqeynaya Shabaab
Maalintii Axada 29 December, milatariga Mareykanka ayaa qaaday duqeymo dhanka cirka ah oo ay la beegsadeen Al-Shabaabta gudaha Soomaaliya, waxaana lagu dilay afar kamid ah Al-shabaab sida laga soo xigtay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika (AFRICOM).
“anagoo kaashaneyno dowladda federaalka Soomaaliya ayaan saddex weerar oo dhanka cirka ah ku qaadnay 29-kii bishii Diseembar laba goobood, oo lagu bartilmaameedsaday maleeshiyaadka Shabaab,” ayaa lagu yiri warbixin uu soo saaray taliska Mareykanka ee Afrika.
Warbixinta ayaa lagu xusay in duqeynta lagu beegsaday goobaha kala ah Kuunya Barow iyo Wakalyo barow
“Tan iyo markii ugu horreysay (weerarada) Al-Shabaab 2011, kooxdani waxay si naxariis darro ah u dileen boqolaal dad ah,” ayuu yiri Jeneraal William Gailer, oo ah agaasimaha hawlgallada AFRICOM.
Mareykanka ayaa xoojiyay weerarada ay ka geystaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee loo yaqaan Droneska ​Soomaaliya sanadka 2019, isagoo bartilmaameedsanaya dagaalyahanada Shabaab iyo kuwa kale ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda Daacish ee Soomaaliya.
Ciidamada dowladda ayaa ka saaray magaalada Muqdisho Dagaalyahanada Shabaab sanadkii 2011 iyaga oo taageero ka helaya ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika laakiin wali waxay wadaan weeraro dhiig badan ku daatay.
Previous articleFaahfaahino kasoo baxaya qaraxii xoogaana e ka dhacay ex-control afgooye
Next articleSomaliya oo ay soo wajahday “khatar saddex-geesood ah”